'तर, तेरो सम्झना यो मनमा छ'- फिचर - कान्तिपुर समाचार
'तर, तेरो सम्झना यो मनमा छ'
यमबुद्ध बिना र्‍यापका तीन वर्ष
काठमाडौँ — अमेरिकी र्‍यापर कल्याण चाम्सलिन नेपाल आएकी थिइन्, सन् २०१२ मा । एक मित्रमार्फत् उनीसँग भेट भयो । उनले यहाँका र्‍यापरहरुसँग सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफल गर्न चाहिन् । चिनेजानेका केही र्‍यापरलाई खबर गरें ।
अरु र्‍यापरलाई पनि लिएर आउन अनुरोध गरें । र, भेट भयो- जयनेपाल हलसँगै जोडिएको आँखीझ्याल रेष्टुराँमा ।
केहीबेरमा एउटा केटा हामीतिर आयो । ख्याउटे । कालो । अनुहारमा डन्डीफोर, क्याप पछाडि फर्काएको । खुकुलो कपडा लगाएको । आउनासाथ उसले चुरोट सल्कायो । एक ठाउँमा बसेन, घरी यता, घरी उता । अरुले बोल्दा पनि खास ध्यान दिए जस्तो नलाग्ने । चुरोटचाहिँ ओठबाट छुट्न नहुने । त्यहाँ निर्णय श्रेष्ठ, अराज केशव, जिएक्स सोलजस्ता गिनुचुनेका र्‍यापर थिए । त्यो केटाचाहिँ देख्दा अलि ‘आवारा', पारा पनि उस्तै ।
बोल्ने पालो उसको आयो । हाम्रो समाजको चरित्र कस्तो छ, हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो र्‍याप प्रभावकारी हुन्छ, र्‍यापमा समाज कतिको प्रतिविम्बि भइरहेको छ, नेपाली र्‍यापले अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्नुका कारण के–के हुन्, उसले अंग्रेजीमा धाराप्रवाह दियो । अरुजस्तै म पनि ट्वाल्ल परेर सुनिरहें । माहोल पूरै बदलियो । महिला हिंसा, सडक बालबालिका, लागूऔषध दुर्व्यसन, चेलिबेटी बेचबिखन, प्रतिभा पलायनदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मको उसको बुझाई साँच्चै गज्जब थियो । अभिव्यक्ति शैली पनि आकर्षक ।
अबचाहिँ मलाई त्यो केटाबारे चासो जाग्यो ।
नजिकैको र्‍यापरलाई सोधें, ‘ऊ को हो ?'
‘यमबुद्ध,' उसले भन्यो ।
मैले ठ्याक्कै चिनिनँ, मेरो अनुहारबाट भेउ पायो क्यारे !
र, भन्यो, ‘त्यही साथी... गाउने यमबुद्ध क्या ।'
त्यसपछि मेरा आँखा तन्किए । त्यो गीत धेरै सुनेको, एकाध भिडियो पनि हेरेको तर यमबुद्धको अनुहार याद भएनछ । ड्रग्सका कारण बितेको साथीलाई सम्झेर गाएको त्यो गीतले नेपाली हिपहपमा हलचल ल्यायो । हरेक शब्द मुटुमै बिझ्ने । कतिपय यो गीतपछि नेपाली र्‍यापको अर्को अध्याय सुरु भएको मान्छन् । यी सब कुरा कल्याणालाई थाहै थिएन्, उनले पनि अघिसम्म यमबुद्धलाई 'भाउ' दिएकी थिइनन् । त्यसपछि भने नजिकै बोलाइन, अंकमाल गरिन् र सबैको सामून्ने भनिन्, ‘तिम्ले तिम्रो समाज चिनेको रहेछौं । र्‍यापरमा हुनुपर्ने पहिलो गुण यही हो । तब मात्र र्‍यापमा समाजको असली चित्र उर्तान सकिन्छ, सवाल उठाउन सकिन्छ ।' त्यसपछि जति बसियो, उनले अधिक समय यमबुद्धसँगै बिताइन् ।
मैलेचाहिँ यमबुद्धलाई केही भनिनँ, परिचय दिँदै मोबाइल नम्बर लिएँ ।
त्यतिबेलासम्म उनी युट्युबमा पहुँच भएका, अझभन्दा युवापुस्तामाझ मात्र परिचित थिए । तर छनक मिलिसकेको थियो, नेपाली हिपहपमा एउटा आँधी आउँदैछ । अर्को गीत ‘आमा...' ले पुनः प्रमाणित गर्‍यो, उनी आमर्‍यापरभन्दा अलग छन् । र, विशेष पनि ।
‘साथी...' गीतमा यमबुद्ध गाउँछन् :
'जित्नुभन्दा ठूलो कुरा हिम्मत नहार्नु हो
त्यसैले लड्दै छु, संघर्ष गर्दैछु'
जिन्दगीबाट हार खाएका र दिक्क भएका धेरै युवामा यसले उर्जा दिएको थियो । तर किन हो कुन्नी, यमबुद्ध स्वयंलेचाहिँ हिम्मत हारे । जबकी उनी त जित्दै पनि थिए ।
तीन वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् २०७३ माघ १ गते उनले आफ्नो कथा आफैं सक्काए । लन्डनस्थित आफू बसेको घरको बाथरुमको झ्यालको डण्डीमा पेटीले बाँधेर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । दुई वर्षदेखि उनी उतै बस्थे । उनको मृत्युका कारणबारे अनेक अड्कलबाजी भए, हल्ला चले तर खास कारण त उनले उनीसँगै लिएर गएका थिए । ‘सुसाइड नोट' वा अरु केही भेटिएन । उनले प्राण त्यागे, संसारभर छरिएका उनका प्रशसंकको आँखा रसायो, छटपटी चल्यो ।
यमुबद्ध र्‍यापर मात्र थिएनन्, प्रेरणाको स्रोत थिए । सपना र संघर्षको खानी थिए । मुख्य सपना थियो, नेपाली र्‍याप लिएर वर्ल्ड टुर गर्ने । नेपाली र्‍यापका प्रणेता मानिने गिरीश खतिवडासँग यो सपना बाँडिसकेका थिए ।
यमुबद्ध उनको ‘स्टेज नेम' । परिवारले राखिदिएको नाम- अनिल अधिकारी । ‘यम' अर्थात् हिंसाको प्रतिक । ‘बुद्ध'चाहिँ शान्तिको । समाजमा दुवैथरी चरित्र थियो, सायद उनमा पनि, त्यसैले दुवैलाई जोडेर आफैंले न्वारान गरे, ‘यमबुद्ध'।
जतिबेला उनी उदाए, त्यतिबेला नेपाली र्‍याप सुस्ताएको थियो । र्‍यापको व्यावसायीकरण हुनसकेको थिएन्, केही प्रतीभा ‘अन्डरग्राउन्ड'मै सिमित थिए । पूरा संगीतप्रति नै समाज उदार छैन । र्‍याप त एकहिसाबले बहिस्कृत । तर यमबुद्धले यही असहज बाटो मार्ग रोजे ।
धेरैलाई लाग्छ, ‘साथी...' गीतपछि यमबुद्ध रातारात हिट भए । तर होइन । त्यहाँसम्म आउन उनले अनेकौं हन्डर खानु परेको थियो ।
सन् २००३ बाटै र्‍याप लेख्न थालेका थिए । तर आफैंलाई चित्त बुझ्दैन्थ्यो, कुनै–कुनै मनपर्थ्यो, अरुलाई सुनाउन धक मान्थे । एकैपटक खरर र्‍याप हान्न सक्दैनथे, लघुताभाष हुन्थ्यो । त्यसैले हरदिन अभ्यास गर्थे । बुबाआमालाई चिन्ता, छोरो बिग्रियो, ट्यापे भयो भनेर । उनले सन् २०१५ तिर भनेका थिए, ‘तर ममा विनिङ एट्ट्यिुड थियो । सबैलाई चुप लागेर बस्नु मलाई मेरो काम गर्न दिनु भन्थे ।' उनी जतिबेला पनि मनोबलको कुरा गर्थे । यही मनोबलले त हो, उनलाई ‘यमबुद्ध' बनाएको ।
एउटा उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, उनीभित्रको प्रतिवद्धता र उर्जा ।
गाउँको सरकारी स्कुलमा पढेर भर्खरै स्वयम्भूस्थित 'द एक्सेसियर' स्कुलमा कक्षा आठमा भर्ना भएका थिए । त्यहाँ त सबै अंग्रेजी बोल्ने । उनीचाहिँ शब्दपिच्छे अड्कन्थे, नभर्स हुन्थे । लजालु थिए । एकदिन शिक्षिकाले अगाडि आएर अंग्रेजी गीत गाउन भनिन् । रातोपिरो भए । मरीतरी ‘स्माइल...' भन्ने गीत गाए । उनको अंग्रेजी लवज सुनेर सबै गलल्ल हाँसे।
उनले 'मोटेभेसनल स्पिकर'का रुपमा एक ठाउँमा भनेका छन्, ‘त्यो मेरो जीवनकै सबैभन्दा लाजमर्दो क्षण हो । तर मैले हरेस खाइनँ, जसरी पनि अंग्रेजी सिक्छु भन्ने प्रण गरें ।' त्यसपछि उनले अंग्रेजी गीत सुने, फिल्म हेरे, बोल्न र लेख्न अभ्यास गरे । समय कस्तो पनि आयो भने उनले इराज, चिन्गी, टोनी टीजस्ता विदेशी र्‍यापरसँग गीत गाए ।
गीतजस्तै यमबुद्धलाई ‘अमर' बनाउने अर्को कारण हो, र्‍याप ब्याटल । मसँग उनले भनेका थिए, ‘मैले मात्र र्‍याप गाएर केही परिवर्तन हुन्न । नयाँ–नयाँ र्‍यापर आउनुपर्छ, सहरमात्र होइन, गाँउ–गाँउसम्म र्‍याप पुग्नुपर्छ ।' मूलधारका मिडियाले र्‍यापरलाई खास स्थान दिँदैनथे । अरु प्लेटफर्म पनि थिएन । यही अभाव पूरा गर्न उनकै परिकल्पना र पहलकदमीबाट जन्मियो- र्‍याप ब्याटल ।
नयाँ र्‍यापरलाई एक ठाउँमा ल्याएर ‘फ्रि स्टाइल' गराउथे, त्यही खिचेर युट्युबमा हाल्थे । यसले र्‍यापको सुखद माहोल निर्माण गर्‍यो । युनिक पोएट, साकार, बालेन यहीबाट चम्किएका हुन् । लाउरेले यसबाटै राष्ट्रिय पहिचान पाए । समिर घिसिङ ‘भिटेन' अगाडि आउन पनि र्‍याप ब्याटलको भूमिका छ ।
यसमा सन्देह छैन, सन् २०११ पछि जति र्‍यापर आए, उनीहरुमा कहीं न कहीं यमबुद्धको प्रभाव छ । अझ धेरैले के दाबी गर्छन् भने उनको देहान्तपछि नेपाली र्‍यापले अर्को अभिभावक पाएको छैन । ‘र्‍याप ब्याटल' ले समेत निरन्तरता पाएन ।
यमबुद्धका हरेक गीतले उनी बाँचेको समयको कथा भन्छ ।
जस्तो : ‘यो प्रसंग हो...' मा छोरीमाथिको विभेद र चेलीबेटी बेचविखनको दर्दनाक पाटो उघारेका छन् । ‘फुटपाथमा...'सडक बालबालिकाको दुर्दशा । विदेशबाट फर्कन नपाएको भाईको रोदन हो, ‘दिदी...',राष्ट्रप्रेमले भरिएको छ, ‘म फुट्छु तर झुक्दिनँ...'। यी भिडियोमा पनि ‘आफ्नोपना'छ, बहुसंख्य र्‍याप गीतझैं युवतीको हुल राखिएको छैन, र्‍यापर चिल्लो गाडीमा ‘इन्ट्रि' मार्दैन । उनी भन्ने गर्थे, ‘मजस्तो छु, मेरा गीत र भिडियो पनि उस्तै हुन्छ । मलाई केही ढाँट्नु छैन ।'
मर्नुभन्दा तीन दिनअगाडि ‘खतरा' एल्बमको कभर सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा ‘मलामी...' शीर्षकको गीत छ । सुन्दा लाग्छ, उनले आफैंले आफ्नो लागि गाएको मृत्यु गीत हो यो :
'हे आमा म यो कस्तो गीत गाउँदैछु
थकित भएर स्वर्गको ढोका ढक्ढकाउँदैछु
नरुनु तिमी मेरो शरीर आगोमा रन्कदा
चिसा लुगा लिएर मलामी ती फर्कँदा'
‘साथी...' का यी पंक्तिहरुचाहिँ उनका फ्यानहरुले बरोबर उनलाई नै ‘डेडिकेट' गर्छन् :
'नहोलाऔं सँगै आज तँ र म
तर तेरो सम्झना यो मनमा छ' प्रकाशित : माघ १, २०७६ १४:०४
जब दिल्ली प्रहरीलाई अदालतले संविधान पढायो...
को हुन् चन्द्रशेखर आजाद ?
काठमाडौँ — दिल्लीको तीस हजारी अदालतले भीम आर्मीका प्रमुख चन्द्रशेखर आजादविरुद्ध प्रमाण पेस गर्न नसकेकोमा दिल्ली प्रहरीकाे आलाेचना गरेकाे छ । चन्द्रशेखरको जमानत याचिकामा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले नागरिककाे विराेध गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएकाे हाे ।
न्यायाधीश कामिनी लाउले भीम आर्मीका प्रमुखलाई ‘विरोध गर्ने संवैधानिक अधिकार’ भएको बताइन् । डिसेम्बर २१ म नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा दरियागञ्जबाट चन्द्रशेखरलाई दिल्ली प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
अदालतले संसदमा कुरा नउठेपछि मानिसहरु सडकमा ओर्लिएको पनि बताएको छ । न्यायाधीश लाउले नागरिकलाई विरोध गर्ने अधिकार भएको बताउँदै दिल्ली प्रहरीसँग सोधिन्, ‘धर्ना गर्नुमा के गलत हाे ? विरोध जनाउनु के गलत हाे ? सबैलाई विरोध गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको छ ।’
चन्द्रशेखर नेतृत्वको सामाजिक संगठन भीम आर्मीले प्रहरीको अनुमतिबिना डिसेम्बर २० मा जामा मस्जिददेखि जन्तरमन्तरसम्म र्‍यालीकाे आयोजना गरेको थियो ।
संसदले कुरा नसुनेपछि नागरिक सडकमा उत्रिने कुरालाई जोड दिँदै न्यायाधीश लाउले दिल्ली प्रहरीलाई भनिन्, ‘तपाईँहरु यस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ कि जामा मस्जिद पाकिस्तानमा छ । पाकिस्तानमा भएको भए पनि तपाईँ त्यहाँ गएर विरोध प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ । पाकिस्तान अभिवाजित भारतको एक हिस्सा थियो ।’
जवाफमा सरकारी वकिलले विरोध प्रदर्शन गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । यसको जवाफमा न्यायाधीश लाउले यस विषयलाई सर्वोच्च अदालतले कैयौँ पटक धारा १४४ को दुरुपयोगको संज्ञा दिएको बताइन् ।
न्यायाधीश लाउले संसदबाहिर प्रदर्शन गर्ने कैयौँ व्यक्ति पछि नेता र मन्त्री बनेको देखेको बताइन् । संसदमा उठ्नुपर्ने कुरा नउठेपछि नागरिकले त्यस्ता कुरा सडकमा पोख्ने न्यायाधीश लाउले दोहोर्‌याइन् ।
त्यसपछि सरकारी वकिलले चन्द्रशेखरको सामाजिक सञ्जालमा रहेको एउटा पोस्टका आधारमा उनलाई जमानत दिन नहुने तर्क राख्यो । सुरुमा सरकारी वकिलले चन्द्रशेखरको स्टाटस बताउन नमाने पनि न्यायाधीशको निर्देशनपछि उनीहरुले पढेका थिए । चन्द्रशेखरले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता कानुन र एनआरसीको विरोधमा जामा मस्जिदमा भेला हुन सबैलाई आह्वान गरेका थिए ।
न्यायाधीश लाउले चन्द्रशेखरको स्टाटसमा हिंसा भड्काउने कुरा केही नभएको बताइन्, ‘हिंसा कहाँ छ ? यी सबै पोस्टमा हिंसाको कुराचाहिँ कहाँ छ ? कसले भन्यो कि विरोध गर्न पाइँदैन ? के तपाईँले संविधान पढ्नु भएको छ ?’ उनले प्रहरीसँग सोधिन्, ‘तपाईँ मलाई देखाउनुस् कि कुन कानुनबमोजिम धार्मिक स्थानबाहिर प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ?’
न्यायाधीशले यसघटनामा चन्द्रशेखरले हिंसा गरेको केही प्रमाण छ भनेर पनि सरकारी वकिलसँग प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘के तपाईँलाई लाग्छ दिल्ली प्रहरी यति निकम्मा छ कि उसँग केही प्रमाण नै छैन । स–साना घटनाका पनि प्रमाण जुटाउने दिल्ली प्रहरीसँग यस घटनाको प्रमाण किन छैन ?’
दिल्ली प्रहरीले जवाफमा ड्रोन क्यामेराबाट लिएको एउटा तस्बिरबाहेक आफूहरुसँग केही प्रमाण नभएको बताएको छ । अदालतले चन्द्रशेखर आजादसँग कानुनको ड्रिगी भएकाले उनले अदालतभित्र पनि प्रदर्शन गर्न पाउने बताएको थियो । अदालतले चन्द्रशेखरको अम्बेडकरवादी विचारधाराका बारेमा पनि टिप्पणी गरेको थियो । ‘आजाद सम्भवतः अम्बेडकरवादी हुन् । अम्बेडकर मुसलमान, सिख, दलित तथा मुख्यतयाः समाजमा पछाडि पारिएका समुदायको नजिक थिए । उनमा आफ्नै प्रकारको विद्रोहीपन थियो । सायद आजादले गर्न चाहेको कुरा पनि पर्याप्त छैन होला । उनलाई पूरा जानकारी नहुन सक्छ । यदि तपाईँ कुनै मुद्दा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने रिसर्च गर्नुहोस् । तपाईँका दलिलमा उनी परेका छैनन् ।’
चन्द्रशेखर आजादका तर्फबाट दर्ता गरिएको याचिकामा महमूद प्राचाले बहस गरेका थिए । चन्द्रशेखरलाई लगाइएको आरोपमा प्रहरीसँग कुनै प्रमाण नभएकाले उनको गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको उनले बताए । चन्द्रशेखरकाे मुद्दामा बुधबार पुन: सुनुवाइ हुँदैछ ।
चन्द्रशेखर आजाद उर्फ रावण उत्तर प्रदेशको सहारनपुरको धडकौलीमा स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी कानुनमा स्नातक गरेका छन् ।
सन् २०१४ मा उनले विनय रतन सिंहसँग मिलेर भीम आर्मी वा भीम आर्मी भारत एकता मिसनको स्थापना गरे ।
यो संस्था दर्ता भएको छैन, तर यसले दलित र सीमान्तकृत समुदायको लागि लड्ने उद्घोष गरेको थियो । चन्द्रशेखेरले आफ्नो गाउँमा ‘द ग्रेट चमार डा. भीमराव अम्बेडकर ग्राम धडकौली तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ’ भनेर बोर्ड लगाएपछि चर्चामा आएका थिए ।
भीम आर्मी कस्तो संस्था हो ?
भीम आर्मीले भारतका सात वटा राज्यमा ४० हजारभन्दा बढी सदस्य भएको दाबी गर्छ । विशेषगरी यो संस्था उत्तर प्रदेशका सीमान्तकृत समुदायमा लोकप्रिय रहेको छ । यसले सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि तीन सयभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । दलित समुदायका १८ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका युवा संस्थामा जोडिन सक्छन् । संस्थामा सबैभन्दा बढी चमार समुदायका सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै मुस्लिम समुदाय पनि संस्थामा जोडिन सक्नेछन् ।
सन् २०१७ मा भीम आर्मीले दिल्लीमा अम्बेडकरको फोटोसहित ठूलो प्रदर्शन गरेको थियो । दिल्ली प्रहरीका अनुसार भीम आर्माीका झन्डै १० हजार सदस्य जन्तर मन्तरमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रकाशित : माघ १, २०७६ १४:०३